LXQt 0.16.0 inoenderera nekuvandudza izvo zvakaunzwa muchirimo | Linux Vakapindwa muropa
Iyo graphical nharaunda inoshandiswa nekuparadzira senge Lubuntu yaive ingangoita chando kweanopfuura gore. MunaEpril, chirongwa yakakanda chiitiko chakakosha, uye zvinoita sekunge havadi kudzokera kumashure kwenguva yakareba vasina kuburitsa nhau dzakasarudzika, kune izvo zvakangoita maawa matatu apfuura vakaburitsa. Zvikamu LXQt 0.16.0. Uye inouya neakawanda manyowani maficha akagoverwa muzvinhu zvakaita sepaneru yayo, yayo yekumisikidza app, simba manejimendi kana yayo yekupedzisira emulator.
LXQt idekodhi risingaremi rinoshandiswa nehurongwa hwekushandisa husiri kutsvaga hwakawanda hwekugadzirisa kana sarudzo dzekugadzira, asi panzvimbo pezvo dzakanangana nekuita. Yakazvarwa kubva kumubatanidzwa weLXDE neRazor-qt, uye LXQt 0.16.0 yasvika kuenderera mberi nebasa rakanaka ravakaunza yapfuura mwaka. Pazasi iwe une iyo rondedzero yezvakakurumbira zvitsva izvo zvasvika nechikamu chitsva cheiyi tafura.
Pfungwa dzeLXQt 0.16.0
Wakawedzera dzimwe sarudzo kuLibFM-Qt / PCManFM-Qt.
Kunatsiridza muLXQt yekumisikidza app.
Iye zvino unogona kugadzirisa makiyi kuti uvhare pasi, kumisa kana kuomesa komputa, nekuda kwerutsigiro rutsva rwakawedzerwa kumaneja emagetsi eLXQt.
LXImage Qt inowedzera rutsigiro rwekugadzirisa saizi mifananidzo, pamwe nemamwe mafomati emifananidzo.
Iyo LXQt Archiver ikozvino inovhura RPM mapakeji nenzira kwayo.
Yakagadziridza manejimendi uye kumisikidza kwekusarudzika kusarudzika kweye mail mutengi, maneja wefaira kana webhu browser.
Misoro mitsva mitatu yakawedzerwa.
Zadza rondedzero yeshanduko kune iyo kusunungura chinyorwa (muChirungu).
Zvikamu LXQt 0.16.0 yave kuwanikwa zviri pamutemo, asi panguva yekunyora uku inongova fomu yekodhi. Vashandisi vanofarira vanogona kuitora kubva izvi o iyi imwe link kuita yekuisa manyorerwo. Mumavhiki anotevera, masisitimu anoshanda anoshandisa iyi desktop anotanga kuwedzera iyo nyowani vhezheni seyekuvandudza, chero bedzi uzivi hwavo huchitendera. Pane anoshanda masystem senge Lubuntu, uchafanirwa kumirira zvirinani kusvikira iyo Lubuntu 21.04 Hirsute Hippo yaburitswa iyo ichaitika muna Kubvumbi 22, 2021.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » LXQt 0.16.0 inoenderera nekuvandudza izvo zvakaunzwa muchirimo kune avo vanofarira mwenje uye yakapusa